Abakhiqizi bemikhiqizo emisha kanye nabahlinzeki - China Imikhiqizo emisha emisha kakhulu
Kwenziwe ngentando efekethisiwe Setha D ...
I-Cross Stitch Cotton Thread Intambo yaseGibhithe Yombala Wokotini Wokufaka Ukotini 981457A
Amapharamitha womkhiqizo 24 I-Monochrome efekethisiwe intambo ye-rainbow embroidery floss. I-Six Strand Embroidery Floss iyintambo ehlukaniswayo, i-polyester nekotini eyenziwe ngocingo olude oluhle kakhulu lukakotini. Iphindwe kabili nge-sheen ecashile, futhi i-colorfast futhi iyaphela ukumelana. I-cross stitch floss ingasetshenziselwa ukwenza amasongo obungani, i-Cross Stitch, Embroidery, ubuciko bezingane, Ukuthunga, Ukwaluka, i-DIY, i-Crochet njalonjalo.Ifanele izingane, abangane, omama, omama abakhulu, ...
Amamitha ayi-8 Imicu engu-6 Imicu ye-Polyester Ukotini efekethisiwe Intambo I-Polyester Ukotini Isiphambano Sentambo Intambo6310007
Amapharamitha womkhiqizo ama-PC ama-100 ama-50 / ama-50pcs asethwe ngombala okotiniwe ngentambo efekethisiwe intambo isiphambano sokuthunga izintambo ezenziwe ngentambo kakotini owenzelwe ithoyizi le-DIY. I-Six Strand Embroidery Floss iyintambo ehlukaniswayo, i-polyester nekotini eyenziwe ngocingo olude oluhle kakhulu lukakotini. Iphindwe kabili nge-sheen ecashile, futhi i-colorfast futhi iyaphela ukumelana. I-cross stitch floss ingasetshenziselwa ukwenza amasongo obungani, i-Cross Stitch, Embroidery, ubuciko bezingane, Ukuthunga, Ukwaluka, i-DIY, i-Crochet ...
.Wholesale Eco Friendly Ezenziwe Ngesandla Umbala Ukotini Nokwelukiweyo Floss Embroidery Intambo Cross Stitch Ukuthunga Intambo6310009
Amapharamitha womkhiqizo imibala engu-80 efekethisiwe imicu efekethisiwe enebhokisi lesitoreji lomhleli. Umucu wekhwalithi ephezulu we-embroider umbala, i-stereoscopic, amandla aphezulu, gqoka ukumelana, ungapheli, ungaphuli kalula. Ikhwalithi ephezulu futhi ehlala isikhathi eside, intambo efekethisiwe yenziwa nge-polyester ethambile, ebushelelezi ne-silky. Isebenziseka kalula, I-floss ngayinye ingu-8m ubude kanti i-skein ngayinye ye-embroidery floss iza ngemicu eyisithupha. I-cross stitch floss ingasetshenziselwa ukwenza isongo lobungani ...
I-100 Umbala we-DIY Umbala Wokotini Wombala We-Embroidery Thread Cross Stitch Wiring Manual DIY Umbala Wokotini Intambo6310006
Imibala eyi-100 ye-DIY enemibala egqamile yentambo efekethisiwe intambo isiphambano sokunquma izintambo ngesandla umbala wombala wekotini we-DIY. Umucu wekhwalithi ephezulu we-embroider umbala, i-stereoscopic, amandla aphezulu, gqoka ukumelana, ungapheli, ungaphuli kalula. Ikhwalithi ephezulu futhi ehlala isikhathi eside, intambo efekethisiwe yenziwa nge-polyester ethambile, ebushelelezi ne-silky. Isebenziseka kalula, I-floss ngayinye ingu-8m ubude kanti i-skein ngayinye ye-embroidery floss iza ngemicu eyisithupha. I-cross stitch floss ingasetshenziselwa ukwenza amasongo obungani, i-Cross Stitch, Embroidery, ubuciko bezingane, Ukuthunga, Ukwaluka, i-DIY, i-Crochet njalonjalo. Ifanele izingane, abangani, omama, omama abakhulu, osebenza nabo, omakhelwane noma abaqalayo be-cross stitch noma umusa.
Izikebhe ezingama-50/100 zentambo Ezinemibala Eningiliziwe Yenaliti Yesiphambano Inwele Amasongo Imibala Intambo Yesiphambano Sokuthunga Ukotini Ukuthunga 6310001
Imibala engu-50/100 Colours Eco-Friendly eyenziwe ngezandla eyenziwe ngombala
intambo ephothiwe yokuthunga intambo yokuthunga ngentambo.
Intambo efekethisiwe yekhwalithi ephezulu umbala ogqamile, ama-stereoscopic, amandla aphezulu,
gqoka ukumelana, ungapheli, ungaphuli kalula. Ikhwalithi ephezulu futhi ehlala isikhathi eside,
intambo efekethisiwe yenziwa nge-polyester ethambile, ebushelelezi nesilika. Kulula ukuyisebenzisa,
I-floss ngayinye ingu-8m ubude kanti i-skein ngayinye ye-embroidery floss iza ngemicu eyisithupha.
I-cross stitch floss ingasetshenziselwa ukwenza amasongo obungani, i-Cross Stitch,
Imifekethiso, ubuciko bezingane, Ukuthunga, Ukwaluka, i-DIY, i-Crochet njalonjalo. Ifanele i-
izingane, abangane, omama, omama abakhulu, osebenza nabo, omakhelwane noma abaqalayo be-cross stitch noma umusa.